Carruur iyo haween ku baaba’ay shil gaari | KEYDMEDIA ONLINE
Carruur iyo haween ku baaba’ay shil gaari
Degaannnada uu ka arimiyo Maamulka Somaliland ayaa wajahaya dhibaato xooggan oo dhanka waddooyinka ah, waxana inta badan magaalooyinka waaweyn ee Maamulkaasi ka dhaca shilal gaari oo sababa khaasare nafeed iyo bur bur hantiyeed.
HARGEYSA, Soomaaliya - Sida ay xaqiijiyeen Saraakiisha Booliska Maamulka Somaliland 5 ruux ayaa ku geeriyootay 8- kalana wey ku dhaawacmeen kadib shil gaari oo saqdii dhexe ee xalay ka dhacay Magaalada Hargeysa oo xarun u ah Maamulka gooni isu taaga ku dhawaaqay ee Somaliland.
Shilkan sababay khasaaraha dhimashada iyo midka dhaawaca ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen laba gaari oo noocyadooda lagu kala sheegay Dhayna iyo Nooha, kuwaasoo sida la tilmaamay u socday qaab xowli ah, waxana shilku uu ka dhacay meel u dhaw Koontorolka galbeed ee Hargeysa.
5-ta ruux ee shilka gaari ku geeriyootay ayaa waxaa ku jiray ilmo yar iyo 3 haween ah halka marxuumka kalana uu ahaa darawalki mid ka mid ah gawaaridkii shilka gashay.
Dadkii ka agdhawaa Koontoroolka Galbeed ee Hargeysa oo ah halka uu shilku ka dhacay ayaa u soo gurmaday dadkii dhaawaca ahaa, iyagoo ula cararay xarumaha caafimaadka ee ku yaala Magaalada Hargeysa, kuwaasoo maanta si aad ah u mashquulsan.
Saraakiisha Booliska Soomaliland oo warbaahinta kula hadashay goobta uu shilku ka dhacay ayaa darawalada uga digtay in qatar galiyaan nolosha rakaabka ay wadaan,iyagoo taa badalkeedna faray in ay masuuliyad iska saaraan dadka ay wadaan.
Gayiga Somaliland ayey inta badan ku soo noq noqdaan shilalka ceynkan oo kala ah, kuwaasoo dhaliya khasaare isugu jiray dhimasho, dhaawac iyo bur bur hantiyeed, waxana loo sababeeyaa laba arimood oo is biirsaday isla markaana kala ah aqoon yari dhanka xirfada wadidda gaadiidka ka heysata darawalada iyo wado xumo ka jirta deegaannada Maamulka Somaliland.